UCanzibe 2019 | Gcina A Isitimela
Inyanga: UCanzibe 2019
ekhaya > UCanzibe 2019
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Kukho ezininzi izizathu zokuba abantu bayathanda ukuba bahambe. Omnye wabo uyakwazi ukuva kakhulu kangangokuba ukukwazi ukuba amava emitsha nenika umdla. Yintoni eyenza abahambahambayo intle kukuba abantu ezahlukileyo sichulumancile zizinto ezahlukeneyo. Adrenaline junkies…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Art Underground kwizikhululo engaphantsi libonakala yimyuziyam entsha abantu. Baya lokuba omtsha kufuneka-azibone ukuba abathanda art and design. Ngubani ababecinga? Ezinye iindawo zoluntu kakhulu idolo, kubandakanya ubugcisa obukhulu kunye noyilo kunokufunyanwa…
yi UKarina Santos
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Kwiihostele ziye rap embi ngokuba mdaka, nokuguquka, kanye stinky. Kodwa ubusazi ukuba iihostele ziphuculwe ngoku? Kuba abo awuyazi into iihostele ukuba, Khange siphawule nje ihotele kwaye sibaleke nayo. Kwiihostele na indawo cheap…
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Xa ufuna kwiivenkile best iidiliya eYurophu, awunguye kuphela ndikhangele kwezo zahlulo engaphelelwa. ukuba nani ukuthatha uhambo phantsi memory lane nasekuphicotheni imbali. A Ivenkile kweediliya lifana imyuziyam fashion, kubonisa yinkcubeko sixeko…